New Mars Map Okudizayinelwe Humans Regular - Izindaba Rule
New Mars Map Okudizayinelwe Humans Regular
British mapping ejensi Ordnance Survey kudala ibalazwe funda lula usebenzisa idatha Nasa evulekile, inqubo eyayingase isetshenziswe ngenkathi ehamba phezu Mars
Lesi sihloko osesikhundleni “New Mars imephu babekwazi ukunikeza tinkhombandlela ukuba uhambo izivakashi kule planethi ebomvu ngaphandle” lalotshwa Ellen Brait eNew York, The Guardian ngoLwesibili 16th February 2016 18.17 UTC
The British mapping nhlangano Ordnance Survey kudale ibalazwe-to-lula ukufunda surface Mars 'usebenzisa idatha Nasa evulekile.
Ibalazwe - posted ku Flickr ngoLwesihlanu - ihlanganisa 3.8M miles skwele noma cishe 7% surface kwale planethi ebomvu. It yadalwa ngezinga of eyodwa kuya 4M.
Amasayithi ukufika Rovers esidlule ziboniswe kumephu, kuhlanganise Mars Pathfinder ngaphambi kwalokho enyakatho-ntshonalanga Ares Vallis kanye rover Opportunity, empumalanga ye-Margaritifer Terra.
umklami Cartographic Chris Wesson "kuklanyelwe ibalazwe engaphezu kwezinyanga ezimbalwa", ngokusho Ordnance Survey ibhulogi. It is the landscape kuqala nhlangano esikuyi okuvela kwenye iplanethi.
Ibalazwe ihlanganisa 3.8M miles skwele surface Mars '. Photograph: Ordnance Survey / Flickr
"Kwakuwusuku kanzima kancane ekuqaleni empeleni ukuqonda idatha ngokwayo mayelana izinto ezifana nalezi ekuphakameni kanye esikalini nokunye,"Wesson watshela BBC. "Kodwa empeleni inqubo yayibaluleke kucishe naleyo eyasetshenziswa ukwenza i ibalazwe Earth, noma yimuphi ibalazwe OS. "
Naphezu Mars 'isidlaliso njengegazi yayo surface, OS asizange siveze ibalazwe elibomvu. Wesson wathi wakhetsa lwemibala green and pink ngoba "amabalazwe Earth-based akuzona blue njalo futhi green" futhi wayefuna "ukuze libhekisele idatha ngendlela OS obekungaba esiwunikiwe idatha Earth ukudala ejwayelekile ibalazwe ishidi ngendlela ejwayelekile OS isitayela ".
wanezela: "Red ubuye umbala eliphawuleka ngaso kakhulu ukuthi akusilo kakhulu esekelwa ukunqwabelanisa thematic ezifana kokwehla amasayithi noma amagama indawo."
Wesson ukholelwa ukuthi le mephu ihlukile kunamanye amabalazwe planethi ngoba ayephatha ngayo idatha Mars kuyafana "noma ibaphi abanye Earth-based ulwazi ngokwezwe noma landscape".
"Ngicabanga ngisho nakuba izimiso ayafana, ukuklanywa bayo of an map Earth ihluke nebalazwe kwamaplanethi ukuthi ngiye ngabona abantu abangafuni ngaphambi,"Uthe. "Ngiyakuthanda amabalazwe kwamaplanethi futhi ngibathole zibukeke kakhulu … kodwa babonakale, njengoba sidalwe yabo azalwa nalo lokuhlaziya, zesayensi kakhulu futhi ingeyona engokwemvelo e isethulo sabo. "
Ordnance Survey wacelwa ukuba sifake kwemephu usosayensi waseBrithani uDkt Peter Grindrod at Birkbeck, University of London, ngokusho BBC. Grindrod is one of the ososayensi esiza ukufika a rover entsha kuyi-Mars ngo 2019.
Ebuzwa uma ayecabanga abantu babengase usebenzisa ibalazwe yakhe ngenkathi "ehamba phezu Mars" ngolunye usuku, Wesson kwaba ungaqiniseki.
"Kuyinto umcabango nice, ukuthi abantu ngelinye ilanga zazikwazi ukukhomba lapho landscape nxazonke kubo kusukela ibalazwe njengoba nje emaphandleni British, kodwa ibalazwe engase ihluke kakhulu ngaleso sikhathi. "
← 4 Real Flying Cars Ukuthi Empeleni Fly [VIDEO] Philips SHB9850NC headphone ukubuyekeza →